Microsoft wuxuu bilaabay TrueSpace - Geofumadas
Waxaan rajeynayaa inaan raaligelin wanaagsan ka bixiyo habaar ku dhici kara wadamada qaarkood, laakiin shit waa qashinka ay Microsoft ku samaynayso aalad awood leh oo ay ku soo iibsatay 5 bilood ka hor ilaa Caligari.
Oo muxuu ugu arkaa Microsoft inay tahay shit ku socdaa Xaqiiqada TrueSpace?
Sababta oo ah waxay soo jeedineysaa ujeedo fudud oo lagula tartami karo Sketchup! ka Google oo loo yaqaan "sketchi", sidaa darteed qalab aad u xoogan oo ku dheehan kara dhaqdhaqaaqa ciyaaraha, naqshadeynta iyo sameynta shay ayaa rajeynaya inay ku khasaarin doonaan marakka inay u soo bandhigaan moodooyinka 3D Dhul gariirka ... oh! Iyadoo qeexitaan sare leh.
Waxaa jiri doona kuwa aaminsan inuu yahay bilow oo Microsoft ay qorshaynayso inay waxyaabo badan ka qabato TrueSpace ... haa sir, ma diidineyno, laakiin waxaad damacsan tahay inaad kula tartameyso AutoDesk?
Xaqiiqdii maya, muranku wuxuu ku saabsan yahay sameynta wax wanaajiya rafcaanka Dhul gariirka. Qaarkood waxay ku farxi doonaan (ma ahan kuwa iyagu iibsaday softiweerka) halka qaar kalena ay soo jeedinayaan in kala duwanaashaha laga dooran karo ay wanaagsan yihiin; Inbadan ma yaqaanaan waxay filayaan.
Ah, shaqooyinka loogu talagalay in lagu naqshadeeyo ciyaaraha 3D ayaa lagu fulinayaa Microsoft Second Life. Hada markii aad kujirto Windows Vista oo ay tahay inaad soo dejiso otomaatig otomaatig ah, mid ka mid ah kuwa qaadanaya laba saacadood, eyga jaalaha ah ayaa kugula talin kara.Ma dooneysaa inaad gasho noloshaada labaad si aad u ogaato in lacagtaada casriga ah aan lagaa xadin ama aad hubiso in avatarkaaga la diiwaan galiyay? qeexitaanku xabsi kuma jiro?
Wakhti ka hor, Microsoft helay Multimap, qaar ayaa sheegaya inay siinayaan qurxinta MapPoint, oo u dhiganta inay iibsanayso Toyota cusub si ay qeyb uga hesho Chevrolet.
Iyadoo tan laga helayo TrueSpace waxay i xusuusineysaa oo keliya markii Microsoft ay iibsatay shirkadda FoxPro si ay astaanta ugu dhejiso oo ay u disho si ay noogu siiso super Access.
Post Previous" Hore MapBuilder is dhiibay ... mid kale
Post Next Goob wanaagsan oo IMS ah ayaa la sameeyay ManifoldNext »